Ko vanhu vanosarudza manyore kana mawiricheya emagetsi?
Posted on September 22, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Zvinodiwa nemunhu pakati pebhuku kana wiricheya yemagetsi kazhinji zvinoenderana nemamiriro emunhu epanyama uye emari. Ose ari maviri ane zvayakanakira nezvayakaipira, zvinoenderana nemuviri wemunhu ezvinhu uye chigadzirwa zvinhu. Ndiwo mumwe wemibvunzo inonyanya kubvunzwa kana uchisarudza wiricheya. Pakupera kwezuva, vanhu vanoda kutenga zvakanakisa wiricheya zvinoenderana nekushaiwa kwavo uye mararamiro. Pazasi pane zvakanaka nezvakaipa zvebhuku remagetsi uye emagetsi wiricheya.
manyuwari wiricheya inoda munhu ari pachigaro kuti amufambise iye pasina iyo rubatsiro yebhatiri. Muchengeti anogona kusunda munhu ari mu wiricheya kana inogona kufambiswa nemaoko ne kushandisa maoko ekutenderedza mavhiri kumberi kana mushandisi agara pasi. Manual mawiricheya zvakanakira vanhu vane mwero kune wakanaka wepamusoro muviri simba nekuti dzinozvifambisa.
Inoda kushoma kuchengetedza
Chigaro chemanyore chiri nyore senga kana uchifamba uye usinga zvinoda bhatiri mhosva nekuti ndidzo kazhinji inofambiswa nemushandisi. Zviri nyore kutakura yakabatana nehukuru hweiyo wiricheya yemawoko inobvumira kufamba kuri nyore mukati mezvakaomeswa nzvimbo. Zvakare, ivo vanogona zvakare kubviswa nyore uye kusimudzwa nekuti mazhinji Chichemo chemaoko vane zvishoma zvinofamba zvikamu uye zvinoda zvishoma kugadzirisa.
Inoda simba repamusoro remuviri
Panogona kuda muchengeti kana shamwari kuti Push
Zvishoma mune dzimwe nzvimbo
Kwete. Chichemo chemaoko inoda imwe nhanho ye simba uye nepakati izvo zvinogona pachazvo gadzira nyowani nyaya nekudzokororwa kushandiswa senge mapfudzi kupfeka uye kubvaruka. Zvinogona kuve zvakaoma kuti vashandisi vaende madaro marefu kana kumusoro kumusoro kwekutsvedza kwenzira.
An wiricheya yemagetsi iri inofambiswa nemabhatiri, ayo anotendera otomatiki mafambiro anodzorwa nemushandisi. Tsvimbo yekudzora iri padyo nenzvimbo yechigaro inobvumidza mushandisi kutungamira mafambiro avo asingade rubatsiro. Zvisinei, yakashandiswa mavhiripu zvakajairika zvinodhura uye hazvisi nyore kutakura.
Yakanakira vanhu vasina simba repamusoro remuviri
Nyore uye Nyore
Kushandiswa kwenguva refu
Hazviiti inoda chero rubatsiro ku kusunda chair
Mawiricheya emagetsi zvinoda kwete simba kubva kumushandisi iyo inobvumidza yakakura kwenguva refu nyaradzo. Ivo vane iyo kugona kuenda kumberi pasina mushandisi kuneta. Mukuwedzera, izvi mawiricheya kazhinji iva nezvakawanda maficha akabatanidzwa mukugadzirwa kwavo senge kutsenhama uye tilting sarudzo idzo dzakanakira kudzikiswa uye kumwe kunobatsira kana kudikanwa kuhutano nekushanda. Ivo vane akasiyana drivetrains ayo anogona kufukidza akasiyana akasiyana terrains kubva pahuswa uye tsvina kune pavement.
Hazvisi nyore senga kupinda mumotokari kana kufamba
Zvingangoda kuchengetedza kana mamwe mabhatiri
Zvisinei, ivo vari kazhinji inorema uye yakanyanya kuoma ku senga uye kufamba ne. Vanoita inoda nguva dzose kuchengetedza uye kuchaja bhatiri nguva dzose. Zvakare, ivo vakawanda zvakanyanya zvinodhura pane Chichemo chemaoko because of the yakakwirira kugadzira ye wiricheya yemagetsi pamwe nehurongwa hwakaomesesa.
Paunenge uchifunga pakati pebhuku kana wiricheya yemagetsi, tora uchifunga nezve iyo mutengo renji, panyama ezvinhu, uye kushandiswa kwekutanga kuwana kukwana kwakakwana. Vamwe vanozoona kuti iyo wiricheya yemagetsi zvichavadzivirira kubva kumhepo pavanokwira munzira asi vamwe vanganzwa vanakidzwa nerusununguko runouya nekugona kuzvisimudzira. Zvese mune zvese, zvinofarirwa nevanhu zvinosiyana.
Yakakosha zvidyiwa vanofamba vanofungidzirwa sevana chemawiricheya?